Aragti: Isbadalada iyo Doorashada Somalia 2012
Waxaa wayahan dambe qurbo joogta ee Qaarada Europe - North America iyo Qaaradaha kale iil gaar leh ku eegayan Horumarka Dalkooda ka socdo. Dalkeena hooyo Dib u Dhis Iyo Mamul Wanaag ayaa ka jiro sida sawirada hoose ku arki kartiin.
Waxaa aragnay Mogadishu sidee hadeer ku socoto inee noqon rabto Magaalo bilicda soo jiidato Somalida qurbaha. Malin malinta ka si dambeyso shacab farabadan ayaa ku sii qulqulaya iyo ajanabi fara badan oo maalgashi la damacsan sida Turkey – Dubai iyo shirkado Oil oo ka so jeedan Britain – Canada iyo Australia.
Mashruuca Stabilization Plan ee Dowlada TFG Hogaaminayan sii fiican ayuu u hirgalay.
Mahad Wax Iska Leh Allah Ka Sokow TFG - AMISOM – USAID iyo Mamulka Gobolka Banadir.
Waxee Mamulka Gobolka Banadir Qabteen howla culus oo mamuladi ka horeyay qaban wayeen oo eh inee casimadda Mogadishu ku soo kordhiyeen:
- Dab Damiis
- Gurmadka Deg Deg Eh (Ambulance)
- Jidadka muhiimka eh Ku Rakiibeen Leerar Casri Eh
- Shaqalaha Suuqa Bakaraha iyo Suuqada Kale Uniform U Gaar eh u Sameyeen iyo inee burburiyen dhismayasha sharcidarada
- Magaaloyinka Istanbul – Oslo iyo Toronto la mataneyeen casimadda Mogadishu
- Nadaafada Wadooyinka Haagjiyeen
- Maalgashi ugu fududeyeen Ganacsatada Somaaliyed ee aduunka dacalada ku nool.
- Saldhigiyada Booliska qaarkood iyo xarumaha degmooyinka daycatireen
- Barakacayasha Hantidooda ku wayeen dagaalada sookeye ilaa 2009 boqolkii 80% in ka badan guryoohoda mamulka ugu fududeyen inee dib u soo ceshtaan.
- Mashruuciyo Jidadka Mogadishu Lagu dhisayo hirgaliyeen uuna socdo ayago kashanayan qurbojoogta iyo Hayadaha Caalamiga sida USAID – TIKA iyo UNDP etc.
- Qofwalba oo Maalgashi la damacsan Mogadishu dhuul ganacsi ayee uu balanqaden mamulka Banadir.
Mayorka Mogadishu iyo Mamulkiisa waxee u Fududeyeen ganacsatada inee dib u furtan Hotelada hore iyo kuwa cusub.
Aran Guest House – Mogadishu Hotel Cusub
Waxee arrimahan iyo howlaha kale aan la soo koobi karin kalifeen inee Somalida Morale ahaan ku farxan Horumarka Dalkooda Hooyo rajo wanaagsan ka filayaan Somalia Mustaqbalka Dhow.
Waxaa hubaa inee Maalgashi ka badan saameyn doonan Dhalinyaro tiro ahaan la soo koobi Karin maadama Somalida qurbaha ku nool kor u dhaafayan 1 million. Boqoliiba 65% ama in ka badan ee yahiin Dhalinyaro.
Suuqayada iyo jidadka burbursana oo dib u dhismay.
Nidaamka askarta Trafiikada oo dib uu so noqday
Waxqabadka Dowlada TFG oo Hogaaminayo Madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed tayo ee ku tilaabsaden oo eh .
- Xiirarka Caalamka iyo baahida Shacabka Somalia ayee hordhigeen beesha caalamaka sida Shirarka Istanbul – London –Dubai – Addis Abeba – Djibouti - Italia iyo Nairobi.
- Isfaham iyo isku soo dhawansho ka bilaaben mamulada dalka ka jiro sida Ahlsunna Wal Jamaca - Galmudug – Puntland - iyo dalka la magac baxay Jamhuuriyada Somaliland.
- TFG waxee ugu fududeyeen Shirkado Shidaal qodista inee Puntland ka howlgalan.
- Mashruuciyo dalka lagu hormarinayo ka bilaaben deeganad laga xoriyay Alshabab sida Gobola Shabelle Hoose iyo kan Dhexe - Hiiraan – Banadir – Gedo iyo Galgadud.
- Amniga gobolada ayee adkeeyn inkasto qarxayo ayee wali dhacaan.
- TFG waxee ku guuleysteen Roadmapka inee Hirgaliyaan inkasto dastuurka u bahan yahay dhowra qodobo inaa la saxo mar uun oo dowlad rasmi la helo sida Casimadda inee Tahay Mogadishu iyo qofka awooda inuu hal Xaas ka badan guursan karo – Wax Allah u baneeyaya inaa dastuur lagu qor oo laga horyimaada ma ahaan.
- Xarumaha Waxbarashada ee Dowlada ka rareen shacabka ku noola iyo dib u dhis ka bilaabayeen
- Xeryoyiin qaxootida kumnaankun lagu gargaaro ka fureen agagarka Mogadishu iyo gobolada dalka u gargaaren.
- Inee dib u Howlgaliyeen TVga Qaranka SNTV iyo dayactireen xarumaha dowlada sid Radio Mogadishu iyo Bankiga Dhexe.
- Aden Adde International Airport Dayacatir casri eh ka bilaaben ayago kashaanayo SKA Logistic iyo dowlada Turkey.
- Dhagax Dhigeen Isbiitalka Caruurta oo TIKA dhisayaan oo noqon doona isbitaalka ugu weyn ee Children Hospital ee geeska Afrika inshallaha.
- Waxee Dowlada Sheikh Sharif Ahmed Hogaaminayo tababaro tayo leh u sameyeen ciidanka Asluubta – Booliska iyo militariga oo tababaro uu diray Jamhuuriyada Uganda – Djibouti -Turkey iyo Ethiopia.
- Waxee ku guuleysten inee isku keenan Mogadishu Odaysha Dhaqanka Hawiye – Digil Mirfle – Darood - Dir iyo Beelaha Laga tiro Badan Yahay.
- Dhaqalaha Somalia Air Space oo Million dollar ka soo gali jiray. Waxaa Nairobi iska cuni jireen shaqalaha IOAA. Dowlada TFG dhaqaalahas waa ku guuleysten inee mamulan mustaqbalka dhow ayaga iyo Joint Financial Board Committee marka laga gudbo August 2012.
- Fududeyen dib u Dhiis Maxjarka Xoolaha oo Million dollar Somalia ugu soo gali jiray wayahi hore ilaa Xiliga burburka .
- Ku Guuleysteen inee Gobolo badan ka saareen kuwa nabad diidka ee wada hadalka diidna iyo wadamada deriskeena inaa nabad ku wada noolano ee waa Alshabab Alqaaida - masuulinta ayaga ka soo gostay ee sar sare ayaa ka yaabay dhaqan xumadood sida Xasan Macalin Ibraahim loo yaqano Xasan Al Wajidi, Imaan ka ahaan jiray Masjidka Xaramka ee Sacuudi Arabia oo ku biiray Dowlada Somalia July 2012.
- Hantidood Xaqa Ah dib ugu celiyeen qoyska General Salad Gabeyre iyo Colonel Abdulqadir Dheel oo sii arxandaro lagu dilay hantidoda lagu qabsaday waagi dowlada kacaanka.
- Tuuloda Gelinsor Degmo Gobolka Galgaduud ka mid eh u Wareegto ku Magacaabay. Shacabka degaandas ku nool ku farxeen wareegtadas.
Golaha Barlmaanka cusub ee Somalia Maxaa Talo u Eh?
Dowlada TFG uu Hogaaminayo Sheikh Sharif Ahmed waxaa la gudboon Howlaha culus uu qabtay oo kor ku xuusan inaa loo tixgaliyo loona dayo inuu dhamestiriyo howsho u mudad waday iyo wax u qabsomay inta la fiiriyo.
Waxuu Sheikh Sharif Sheikh Ahmed la imaday Habadhaqan Wanaagsan oo Somalia dhan ku tageersan yahiin marka laga reebo ku fara ku tiris eh oo casimadda Mogadishu ka soo horjeeda sida Wasiirka Dastuurka iyo Madaxweynaha Puntland.
Marka la xisaabiyo dagaalada sokeye ka bacdi Madaxweyneyasha soo maray hogaamiye la mid eh ma soo marin Jamhuuriyada Somalia.
Waxuu gartay inuu dalka ku haago Islamnimo iyo Wadanimo iyo inuu Aqoonyahno dalka joogan iyo kuwa Qurbo Joog eh u xilall u Magacaabay asago danta Dalka iyo Shacabka eegayo.
Manta nasiib daro dadkii shalay uu soo saray ayaa raban inee meesha ka saran sida Mahamud Farmajo oo lagu yaqaano nationalism.
Waxaa ka mid eh Raaisul Wasaare Professor Abdiwali Mohamed Ali oo mucaarad weyn ku ahaa Madaxweyne Sheikh Sharif Ahmed waagi Midowga Maxkamdaha oo ku tilmaami jiray waa mayal adag iyo aragagxiso. Sheikh Sharif sidaas oo ee tahay waxu ka eega kartiidis Dhaqale iyo aqoontis sidaas uun ka dhigay Prime Minister Somalia 2012-07 .
Waxuu uuna Media uu aqabalay inee shacabka kaga jawaabana suuala iyo wareysi kale duwan.
Siyaasada noocas ma lagu yaqaano qaarada Geeska Africa.
Hada nahay Somali waxaa eegna dhinaca xun lakin horumarka iyo isbadalada Somalia ka socodo waxaa asal u eh Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo taliyaashiis oo dad karti leh u soo xulay xillka Xukumadda iyo mamulada sida Mudane Omar Abdirashid iyo Mudane Mohamud Farmajo iyo Mayorka Mahmud Omar Tarsan.
Waxaa Sheikh Sharif Sheiikh Ahmed la gudboon inuu la heshiyo xisbiyada mucaaradka eh sida xisbiga Hiil Qaran hadu ku Guuleysto Madaxweynimada inuu mid ka mid eh Xilalka Raaisul Wasaare u magacabo hogaamiyasha Hiil Qaran ama Tayo sidaasna xukum wanaag la sameyo qaar ka mid eh xisbiyada mucaaradka.
Sababto eh Shacab badan oo aqoonyahano iyo dhalinyaro u badan waxee tageersan yahiin:
Xisbiga Hiil Qaran - Professor Ahmed Ismail Samatar iyo Mudane Mahamud Farmaajo ee Tayo Xogayaha Guud.
3 Arrimood ayaa suurtagali eh inuu Sheikh Sharif meesha laga saari doona
1. Isbadal ayee rabaan shacabka Somalia iyo beesha caalamka
2. Warbixinta Monitoring Group ee masuulinta TFG bahdilay
3. Somalia saxixiiyaasha xaq uma leh inee Gobolada dhan oo Somalia Matalan.
Waxaa doorashada Madaxweyne 2012 August isku haysan doona wareegada ugud dambeyo musharaxintan:
1. Sheikh Sharif Sheikh Ahmed
2. Professor Ahmed Ismail Samatar – Hiil Qaran
3. Mahamud Farmajo - Tayo
4. Abdullahi Ahmed Addou
Prime Minister ama Professor Abdiwali Mohamed Ali shalay waxaa magac u yeelay Sheikh Sharif Ahmed iyo Mahmud Farmajo oo kuu soo xulay aqoontis iyo sxbnimada ka dhexeysay labadood asago mucaarad weyn kuu ahaa Madaxweynaha TFG.
Waqtigan hadeerka eh Professor Abdiwali waxuu ku haminaya inuu xilka President ku guuleysto doorashada 2012 August.
Professor Abdiwali Mahamed Ali oo karti mamul leh waxaa la gudboon intuu tageero labada hogaamiye oo magaciisa soo saaray sida hogaamiyaha Wadaniga eh Mohamud Farmaajo ee xisbiga Tayo ama Madaxweynaha jawiga isbadalka horumareed uu keenay Somalia ee Mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed.
Xisbiga Hiil Qaran - Professor Ahmed Ismail Samatar iyo Mudane Mahamud Farmaajo ee Tayo Xogyhan Guud ka eh.
3Arrimood ayaa suurtagali eh inuu Sheikh Sharif meesha laga saari doona
3. Caalamka oo Somalia la damacsan inuu hogaamiyo qof aragti qunyarsocod leh iyo anaan kasoo jeedan Hawiye ama Darood
Waxaa doorashada Madaxweyne 2012 August isku haysan doona wareegada ugu dambeyo musharaxintan marka saadaliyo:
Professor Abdiwali Mahamed Ali oo karti mamul leh waxaa la gudboon intuu tageero labada hogaamiye oo magaciisa soo saaray sida hogaamiyaha Wadaniga eh Mohamud Farmaajo ee Tayo ama Madaxweynaha jawiga isbadalka horumareed uu keenay Somalia ee Mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed.
Doorasha marka sii fiican uu darajay waxaa isku keenaya inee xildhbaanada Beesha Shanaad, Haweenka iyo Xildhbanada Dir inee ugu shuubi doonan Xisbiga Hiil Qaran. Xildhbaanada Dir oo Mogadishu joogan mowqif adag oo Somaliland ma aaminsan intooda badan sidaas oogod ayee codkood ugu shuubi doonan Professor Ahmed Ismail Samatar.
Marka waxee ku xirantahay Xildhbanaada Hawiye – Darood iyo Digil iyo Mirfle codkood yee ku tageeri doonan Mahmud Farmajo - Sheikh Sharif Ahmed - Ahmed Ismail Samatar ama Abdullahi Addowe ?
Waxaa aaminsanhay inuu Sheikh Sharif doorashada laga adkaan doona uuna meesha la wareegi doona Professor Ahmed Ismail Samatar oo Mareykanka wataan uuna wareega ka ma dambeysta kaga guuleysan doono Sheikh Sharif Ahmed.
Eng Mahdi Abdiwali